१२ भदौ । मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय (एमयु) को स्थापना मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय ऐन, २०६७ बमोजिम भएको हो । स्थापना भएको सात बर्षमा एमयुले विभिन्न शैक्षिक एवं प्रशासनिक गतिविधि सञ्चालन गरेको छ । विश्वविद्यालयमा मानविकी र सामाजिकशास्त्र, व्यवस्थापन, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि र इन्जिनियरिङ संकाय…
किन हुन्छ सडक दुर्घटना ? दोषी को ?
अावरण तस्बिर : गुगल सेरोफेरो२६ साउन । दिनहुँजसो हुने सडक दुर्घटनाबाट धेरै मानिसले ज्यान गुमाउनुपरेको यथार्थ हामीसामु छ । किन हुन्छ त सडक दुर्घटना ? सडकमा जथाभावी गर्दा वा यात्रु, सवारी साधन र सडकको तालमेल नमिल्नुले पनि दुर्घटना निम्त्याउँछ । सडक वा सवारी…
कहालि लाग्दा द्वन्द्वकालका यौनजन्य पीडा (घटना अध्ययन)
तस्विर : गुगल २ असार, सुर्खेत । द्वन्द्वको समयमा द्वन्द्वरत पक्षबाट भएका यौनजन्य हिंसामा परेका महिलाहरुका पीडाको अनुमान गर्न नसकिने खालका छन् । द्वन्द्वको समयमा यौन जन्य हिंसामा परेका महिला अछाममा मात्रै ५० भन्दा बढी छन् भनिन्छ । तर यस…
समृद्ध नगर निर्माणमा तीन मेयरको प्रतिवद्धता
सेरोफेरो५ जेठ, सुर्खेत । बुलबुले एफएम १०३ विन्दु ४ मेगाहर्ज सुर्खेत बाट रेडियो धुर्वतारा सामूदायिक एफएम ८९.८ मेगाहर्ज र सेरोफेरो डट कमको लागि स्थानीय तहका नवनिर्वाचित तीनजना नगर प्रमुखहरुसंग आगामी योजनाका विषयमा गणेश वलीले गरेको कुराकानीको सारसंक्षेप । प्राविधिक सहयोग : त्रिप्ती…
तन्नेरीले सोधे– किन दिने तिमीलाई भोट ?
२१ बैशाख, सुर्खेत– वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका मेयरका उम्मेदवारलाई एक ठाउंमा राखेर तन्नेरीहरुले स्थानिय तहको निर्वाचनमा भोट दिनुपर्ने कारण सोधेका छन् । आज वीरेन्द्रनगर नगरपालीकाको कार्यालयमा तन्नेरी चासो सुर्खेतले विभिन्न राजनीतिक पार्टीका मेयरका उम्मेदवारहरु बीच ‘डिवेट’ कार्यक्रमको आयोजना गरी सबै उम्मेदवारहरुलाई…